प्रविधि लत्याउँदा अविश्वसनीय एनआरएनए चुनाव :: महेशकुमार खाती :: Setopati
प्रविधि लत्याउँदा अविश्वसनीय एनआरएनए चुनाव
नेपाली आइटी विज्ञ भन्छन् - ‘एनआरएनएले जिम्मा दिए अनलाइन भोटिङ गराउन सक्छौं’
कोपनहेगन, साउन ३२
एनआरएनएको लोगो र नेपाली आइटी विज्ञ क्रमश: जीवन थापा मगर, कुलराज शर्मा र शशी शेष्ठ।
गैर आवासीय नेपालीले नेपालमा नयाँ नयाँ प्रविधि र विकासका तौरतरिका स्वदेश भित्र्याउलान् भन्ने धेरै नेपालीको अपेक्षा छ। सुसंस्कृत राजनीति र लोकतान्त्रिक चरित्र पनि अर्काे अपेक्षा हो।
तर गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) नै राजनीतिको दुर्गन्धमा रूमलिएको छ। केन्द्रदेखि तलका समितिसम्म विवाद छताछुल्ल छ।
एनआरएनएका विभिन्न देशका राष्ट्रिय समितिमा यसपाली मतदानको विषय ठूलो विवादमा परेको छ। कतिपय देशमा विवाद अझै टुंगिएको छैन। निर्वाचन मार्फत नयाँ नेतृत्व चयन भएका दर्जन बढ़ी देशमा ठूलो विवाद भयो।
झण्डै १२ हजार सदस्य रहेको बेलायतमा मतदान गराउने जिम्मा विदेशीलाई दिँदा पनि झण्डै हप्ता दिनपछि मात्रै नतिजा आयो।
के र कसरी अनि किन ढिला? सँगै धेरै फर्जी मतका कुरा सार्वजनिक भए।
नेपालीको बाक्लो बसोबास रहेको अर्को युरोपली देश पोर्तुगलको विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको छ। त्यहाँ अनलाइन मतदानकै कारण समस्या मात्रै सिर्जना भएन, २ वटा समिति घोषणा गरिएको छ। विवाद अझै साम्य भएको छैन।
एसियाको केन्द्र पनि भनिने एनआरएनए जापानमा पनि अनलाइन मतदानले उग्र रूप लियो। जापान बाहिर संसारका विभिन्न देशबाट मतदान गरिएको खबर आएका छन्। आधिकारिकतामा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ।
युरोपको राजधानी रहेको एनआरएनए बेल्जियमको मतदानले पनि राम्रै चर्चा पायो। त्यहाँ मत पेटिकामा भएको हमलाको भिडियो भाइरल मात्रै भएन एनआरएनएप्रतिको विश्वासमा ह्रास पनि ल्यायो। विज्ञान र प्रविधिको यो समयमा मतपत्र छापेर भोट हाल्ने अनि फेरि त्यँही तोड़फोड़सम्म भयो। यो अन्यत्र नभएर युरोपमै हो।
एनआरएनएको शक्तिशाली मानिने युरोपमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदानको सवाललाई लिएर सबैभन्दा धेरै विवाद मात्रै भएन गम्भीर प्रश्नहरु पनि खडा भएका छन्। यो सबै समस्या नेतृत्व चयनको लागि मतदानको विषयले उब्जाएको विवाद हो।
मतदानको विषयले धेरै देशमा समस्या भइरहँदा डेनमार्कमा भने यो १ पटक मात्रै हैन लगातार ४ कार्यकालदेखि विद्युतीय मतदान हुँदै आएको छ।
त्यो पनि आइटी क्षेत्रमा सक्रिय नेपालीले बनाएको विद्युतीय मतदानबाट। न परम्परागत मतपत्र छाप्नुपर्ने। न मत खसाल्ने बक्सा चाहिने। न त घण्टौं लगाएर मत गन्नुपर्ने झन्झट ! सबै समस्याबाट मुक्त।
प्रविधि प्रयोग गरी मतदान केन्द्रको कम्प्यूटरमा गयो। कोड नम्बर हान्यो स्क्रीनमा उम्मेदवारको फोटो र नाम आउँछ। माउसको सहायताले मन परेकालाई मत दिएपछि र सबमिट गर्‍यो। धन्यवाद भन्ने संकेत आउँछ।
मतदानको निर्धारित समयपछि केही बेरमा नतिजा आउने यो प्रविधिले नेपालीको विश्वास जित्दै आएको छ। एनआरएनए डेनमार्कको सन् २०१५–२०१७ को कार्यकालको लागि पहिलो पटक विद्युतीय मतदान प्रयोग भएको थियो। सुरुमा आइटी विज्ञ कुलराज शर्माको सक्रियतामा सुरु भएको हो।
त्यसपछि आइटी क्षेत्रमा सक्रिय शर्मासँगै शशि श्रेष्ठ र जीवन थापा मगरले यो तयार गर्दै आएका छन्। तिनै जना डेनमार्कमा आइटी क्षेत्रमा सक्रिय छन्।
यो टोलीमा रोशन सुवेदीलगायत आइटी क्षेत्रका अरु नेपाली पनि जोडिँदै आएका छन्। एनआरएनए डेनमार्कको लगातार ४ वटा निर्वाचन यो टीमले गराउँदै आएको छ। र सफल पनि भएको छ।
‘४ पटकदेखि इलेक्ट्रोनिक भोटिङ गराउँदै आएका छौं’, शर्माले भने, ‘सुरुमा मेरो इनिसियसनमा भयो, अहिले अरु साथी पनि छन्, सहज रुपमा मतदान गर्न सकिन्छ, खासै समस्या छैन, केहीबेरमा नतिजा आइहाल्छ।’
यसपालि डेनमार्कमा भुलबस एक जना उम्मेदवारको नाम छुटेछ। केही बेरमा त्यो सच्चिएपछि त्यो बाहेक अरु केही समस्या आएन। शर्मा, श्रेष्ठ र थापा मगरले संयुक्त रुपमा यो बनाउँदै आएका छन्।
‘डट नेट प्लाफर्मबाट र एनएसएसक्युएल डाटा बेसबाट विद्युतीय मतदान बनाइएको हो’, आइटी विज्ञ शशी श्रेष्ठले भने, ‘हामी ३ जना मिलेर गर्दै आएका छौं सबैबाट राम्रो प्रतिक्रिया पनि पाइएको छ।’
२०१५ मा विद्युतीय मतदान गराउँदा धेरैमा के कसो हुने हो भन्ने थियो। ‘सबैलाई विश्वासमा लिइयो, नयाँ प्रयोग गर्न पर्छ भनेर कुलराज शर्मालाई म सुशील घिमिरे लगायतले प्रोत्साहन गरेका थियौं जे होस सफ़ल भयो।’ त्यतिबेला आइटी समितिमा रहेका महेन्द्र खड्काले सम्झे।
एनआरएनएको ग्लोबल अधिवेशन अनलाइन गराउन नेपाली आइटी विज्ञ तयार
आउँदो अक्टोबर २३-२५ सम्म एनआरएनएको ग्लोबल महाधिवेशन हुने भएको छ। कोरोना महामारीका कारण यसपालि अनलाइन महाधिवेशन हुनेछ। अघिल्लो विश्व महाधिवेशनमा काठमाण्डौंको तारे होटलमा धेरै नै विवाद भएपछि अध्यक्ष कुमार पन्तले अर्को पटक अनलाइन गर्ने भनेर घोषणा नै गरेका थिए।
१० औं अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का पदाधिकारीको निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले १५ अगष्टभित्र प्रतिनिधिको नामावली संघको (विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम) पठाउनुपर्ने भनेको छ।
एनआरएनएले अहिलेसम्म कसरी र कसले अनलाइन मतदान गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने भन्ने अझैसम्म खुलाएको छैन। यसबारे बुझ्दा एनआरएनएका प्रवक्ता डिबी क्षेत्रीले अनलाइन मतदान तेस्रो पक्ष मार्फत भेन्डरले गराउने बताए। ‘अनलाइन भोटिङ तेस्रो पक्ष मार्फत गराउने योजना छ, भेण्डरले गराउने होला,’ क्षेत्रीले भने।
यता डेनमार्कमा विद्युतीय मतदान गराएको टोलीले भने अवसर पाए अनलाइन भोटिङ गराउन सक्ने बताएको छ। एनआरएनएले त्यो जिम्मेवारी दिए गराउन सकिने उनीहरुको भनाइ छ।
‘हामीसँग भएको सिस्टमलाई मोडिफाइ गरेर अनलाइन भोटिङमा लान सकिन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘एनआरएनएले त्यो जिम्मा दिन्छ भने गराउन सकिन्छ।’
अर्का आइटी विज्ञ जीवन थापा मगरले पनि असम्भव नभएको प्रतिक्रिया दिए। ‘धेरै देशबाट सहभागी हुने भएकाले समय त लाग्छ, तर असम्भव छैन’, थापाले भने, ‘अरु देशमा रहेका अन्य आइटी विज्ञ सहित युद्धस्तरमा काममा लागे गर्न सकिन्छ।’
एनआरएनले महाधिवेशनका लागि अनलाइन भोटिङका लागि विश्वभर छरिएका नेपाली आइटी विज्ञ सहितको समूह बनाएर आवश्यक डाटा दिएमा गर्न सकिने बताउँछन अर्का विज्ञ शर्मा।
‘एनआरएनएलाई हामीले अप्रोच गरेको भए पनि हुने हो, अब पनि गर भन्ने हो भने यसका लागि काम त धेरै गर्न पर्छ। तर, सकिन्छ,’ एनआरएनएका पूर्व आइसीसी सदस्य समेत रहेका शर्माले भने ।
ह्याकरबाट बच्न खर्च बढी गरेर सिस्टम तयार गर्न सकिने जानकारहरु बताउँछन्। नेपालीहरु पनि परदेशमा आइटी क्षेत्रमा प्रख्यात छन्। एनआरएनएले विदेशमा सिकेको ज्ञान, सिप र प्रविधि नेपाल भित्र्याउनु पर्नेमा जोड दिँदै आएको छ।
एनआरएनएले २ पटकसम्म विश्व विज्ञ सम्मेलन समेत गरेको छ। तर, एनआरएनएकै अनलाइन भोटिङ किन तेस्रो पक्ष अर्थात विदेशीलाई दिनुपर्ने त ? नेपालीहरु पनि यो क्षेत्रमा दक्ष छन्। किन विश्वास नगर्ने त ? यो सवाल दह्रोसँग उठिरहेको छ।
‘अरुलाई भन्ने हैन, पहिला एनआरएनए आफैले विदेशमा रहेका नेपाली आइटी विज्ञले तयार पारेको अनलाइन भोटिङबाट काम थालोस्, त्यो जिम्मा दिन्छ भने हामी काम गर्न तयार छौं’, एनआरएनएको केन्द्रीय एमआइएस समूहमा रहेर काम गरिसकेका श्रेष्ठले भने, ‘धेरै देशमा नेपाली आइटी विज्ञ छन्, सबै जुटेर काममा लाग्ने हो भने विश्वसनीय, भव्य र व्यवस्थित अनलाइन भोटिङ गराउन सक्छौं।’
एनआरएनएको एमआइएस तयार गर्न पनि लाखौं रुपैया खर्च गरिएको बताइन्छ। तर, यसपटक अनलाइन फ़र्म भर्ने बाहेक अरु भने कार्यान्वयमा आएको छैन। एनआरएनएले यसपालि अनलाइन मार्फ़त १ लाख जना सदस्य बनेको बताएको छ।
नेपालीले नेपालीको विश्वास गर्नु पहिलो काम हो। नेपाली आइटीलाई विश्वास गर्ने, अवसर दिने र जाँच्ने मौका पनि यो हो। ‘यो सोफ्टवेरको धेरै काम हुने क्षेत्र हो, अब समय पनि कम छ, तर एनआरएनएले गर भनेर दियो भने गर्न सकिन्छ,’ मगरले भने।
अर्का विज्ञ शर्माले खर्चको कुरा भन्दा विश्वास ठूलो भएको बताए। ‘यो प्रडक्ट विदेशीलाई बेच्दा त धेरै पनि पर्न सक्छ तर, नेपालीका लागि त आवश्यक कष्ट उठाएर मात्रै पनि गर्न सकिन्छ नि, यति नै लाग्छ भनेर अहिले नै भन्न सकिन्न, विदेशीले लिने तुलनामा कम पर्छ र सेवा राम्रो हुन्छ।’
शर्मा र श्रेष्ठले डेनमार्कका प्रतिष्ठित आइटी कम्पनीमा काम गरिसकेका छन्। शर्मा र मगर बागलुङका हुन् भने श्रेष्ठको घर चितवन हो। अचेल दुबैले आफ्नै छुट्टाछुट्टै कम्पनी खोलेर आउट सोर्सिङ, एप्स र वेबसाइट डिजाइनको काम गर्छन्। मगर डेनमार्कको चर्चित आइटी कम्पनीमा सफ्टवेयर क्षेत्रमा कार्यरत छन्।
एनआरएनए डेनमार्कका अध्यक्ष शैलेन्द्र अधिकारीले नेपाली आइटी विज्ञले यहाँको निर्वाचन विद्युतीय मतदान सफल रुपमा गराउँदै आएको बताउँदै एनआरएनएको विश्व अधिवेशन पनि अनलाइन रुपमा गराउन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे।
‘डेनमार्कमा विद्युतीय मतदान सफल रुपमा उहाँहरुले (कुल, शशी र जीवन) गराउँदै आउनु भएको छ, सबैको विश्वास छ, एनआरएनएको विश्व अधिवेशन पनि अरु धेरै विज्ञ सहितको टोलीले अनलाइन रुपमा गराउन सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ,’ अधिकारीले भने।
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ३२, २०७८, ०३:१६:००